Furniture Factory - China Furniture Vagadziri, Vatengesi
Yakaputswa zambuko aruminiyamu hwindo
Solid huni hwakawanda kubheka varnish yemusuwo wakadzika
Zingi uye Simbi Fence
CPL zvinhu zvinyowani mhando nyowani yezvinyorwa zvekunamatira pamusika parizvino. Iyo mhando melamine inoenderera yakamisikidzwa zvinhu (uchishandisa iyo yekugadzira tekinoroji isina moto bhodhi), inova yakatetepa yakaderera-kumanikidza isina fire board. CPL ine yakakwira yepamusoro density, yakakwira kusakara kusagadzikana, yakanaka moto kuramba uye isina mvura kuita. Panguva imwecheteyo, iro pepa pevhu rakagadzirwa neakasarudzika fomula IMPREGNATION kugadzira, kuitira kuti iite yakanaka yekupfeka kushanduka mushure mekupisa uye kuzadza kuzara mushure mekuumbwa. Melamine chigadzirwa chehafu-chakapedzwa cheCPL.
TY - 2 kupenda musuwo
Nzira itsva yekuvhura
Iwindo rinotenderera rinotora "yakawanda axis nharembozha shanduko system". Yayo yakasarudzika divi inotsvedza yekuvhura modhi inopidigura aripo matatu ekuvhura nzira dzekusunda-dhonza, yakatwasuka kuvhura uye yemukati inversion mupasi. Inoita izere nesainzi uye inoshanda kushandiswa kwezvakanaka zvekutsvedza hwindo kuchengetedza nzvimbo, hwindo rekuvhura padivi rakavharwa nekudzvanya, uye iyo inverted mhando inoshandura mweya. Kana iyo hwindo rinoyangarara rikavhurwa, iwe unongoda kudzora mubato zvinyoro kuti uvhure ...
Izvo zvakanakira nzvimbo huru yekuvhura, yakanaka kufefetedza, yakanaka sealing, kurira kwekudzivirira, kuchengetedza kupisa uye kusakwana kwakanaka. Kuchenesa hwindo kuri nyore nekuvhurwa kwemukati; hwindo rakavhurika haritore nzvimbo kana kuvhura kuri kuvhurwa. Izvo zvisina kunaka ndezvekuti hwindo idiki uye maonero haana kuvhurwa. Kuvhura kwehwindo rekunze kunofanirwa kutora nzvimbo iri kunze kwemadziro, iri nyore kukuvara kana mhepo ichivhuvhuta; apo hwindo remukati rinotora chikamu chenzvimbo mukati, uye hazvisi nyore kushandisa hwindo rewindo. Kana uchivhura hwindo, hazvisi nyore kushandisa firati rewindo uye keteni, senge mhando haina kuvharwa, uye inogona zvakare kunaya ichinaya.
Kunyanya, nekuti aluminium alloy isimbi, inoitisa kupisa nekukasira, saka kana paine musiyano mukuru pakati pekupisa kwemukati nekunze, aluminium alloy inogona kuve "bhiriji" rekuchinjisa kupisa. Kana zvinhu zvakadaro zvikaitwa madhoo nemahwindo, iko kupisa kwekushisa kwekuita kunenge kuri kusarongeka. Bhiriji rinotyora aruminiyamu chiwanikwa ndechokubvisa iyo aluminium alloy kubva pakati. Iyo inoshandisa epurasitiki yakaoma kubatanidza iyo yakaputsika aluminium alloy mune yakazara. Isu tinoziva kuti kupisa conduction yepurasitiki zviri pachena kuti inononoka kupfuura iyo yesimbi, saka kupisa kwacho hakusi nyore kupfuura nemukati mezvinhu zvese, uye iko kupisa kwekushisa kwekuita kwezvinhu kuri nani. Aya ndiwo mavambo ezita re "zambuko rinoputsa aruminiyamu (chiwanikwa)".
Gedhi rakapetwa mumusika rinoreva musuwo wakadzika usina concave convex maitiro, ayo anowanzo kunzi pepa reganda rinoumba musuwo wehuni wakasimba, uyo unogadzirwa neChinese fir. Musimboti wemusuwo uzere ne semi solid solid. Pamusoro peganda reganda rinoumbwa rakasimba gonhi remusuwo rakagadzirwa neyakagadzirwa bark. Iyo groove yakadzika haina kudzika, uye iro bepa ganda rinotevedzera huni hwezviyo dhizaini.
1. Mhando dzakasiyana dzekuchinja kwemavara, pfungwa dzemazuva ano uye hunhu kutamba uye zvakasvibirira kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvinodiwa.
2. Iko pamusoro pechigadzirwa kwakatsetseka uye kupenya, isina pendi, iyo inogona kudzivirira migumisiro inotyisa yegasi ine chepfu mumhepo nekukuvadza kumuviri wemunhu mushure mekushandisa zvimwe zvekushongedza.
3. Kana ichinge yaumbwa, iyo nguva yekuvaka ipfupi, ndiko kuti, kugamuchirwa kunogona kunakidzwa uye kurota kwacho kunogona kuitika pamberi.
4. Iyo pendi yemahara yekushongedza zvinhu zvakagadzirwa nekushandisa epamberi ekunze ekugadzira tekinoroji uye yemhando yepamusoro yakatengwa mbishi zvinhu zvine zvakanakira kukanganisa kusagadzikana, kusingaite kwepasi kungopisa, chipupuriro chiratidzo, hunyoro-chiratidzo, chengetedzo yakanaka, isina-chepfu, isina kunaka uye kusvibiswa- mahara.
5. Iko kuvaka kuri nyore, uko kunogona kutemwa, kucheka, kugadzirwa uye kurovererwa.
6. Zvinoenderana nehunhu hwako, nharaunda, hunhu, kuravira kushandura akasiyana maumbirwo, ndicho chinhu chakanakira kushongedzwa kwemba uye kushongedzwa kwemukati.
TY - 1 kupenda musuwo
CPL musuwo we lacquer inobheka
Solid color yakapendwa musuwo
Iwo wepasi zvinhu zvekupenda kubheka musuwo iri density bhodhi. Iyo yepamusoro inosaswa nependi yakaunzwa (matatu pasi, mativi matatu, uye maviri mwenje) kanokwana kasere kuumba maitiro, ndiko kuti, mushure mekupenda, inopisa uye yakaomeswa mukamuri yekuomesa. Iyo pendi yekubheka bhodhi inozivikanwa nemavara akajeka, akareruka modelling, akasimba anoonekwa maitiro, akanaka kwazvo uye ane fashoni, yakanakisa isina mvura yekuita, yakasimba anti kusvibisa kugona uye nyore kuchenesa. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti technical tekinoroji yakakwira uye mwero wekuramba wakakwira, saka mutengo unoramba wakakwira; kana tichiishandisa, isu tinofanirwa kuitarisira zvakanaka, tichitya mapundu nekukwaya, kana yangokanganisika, zvinonetsa kuigadzirisa nekuitsiva zvizere. inonyanya kukodzera kune vadiki uye vepamusoro-magumo vatengi vane akakwirira anodikanwa pane chitarisiko uye mhando uye vateedzere fashoni.